ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သင်တို့အတွက်ကောင်းပါသည်?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇူလိုင်. 01 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့လျင်မြန်စွာရက်စွဲဖို့လူတွေကိုတွေ့ဆုံရန်ဆိုရင် single များအတွက်နံပါတ်တစ်ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့စက်မှုလုပ်ငန်းအစဉ်မပြတ်အထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအတွက်ကြီးထွားလာနှင့်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်ခဲ့သည်. သင်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုရှာဖွေတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ထုတ်ကြိုးစားရန်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ခြံစည်းရိုးပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, အွန်လိုင်းမှချိန်းတွေ့ service ကိုအသုံးပြုသင့်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေခြင်းငှါ, အဘယ်ကြောင့်ငါးပါးအပြုသဘောအကြောင်းပြချက်ကိုစဉ်းစား.
1. သာ. ကြီးရွေးချယ်မှု
တစ်ဦးကတစ်ဦးတည်းအသုံးချဖို့သည့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုကိုဒေသခံဘားတန်းသို့မဟုတ်ကော်ဖီဆိုင်ကိုတူတစ်ခုတည်းသုံးပြီးပိုပြီးအစဉ်အလာချိန်းတွေ့တဲ့နည်းလမ်းတွေထက်အလားအလာပွဲများ၏ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အားဖြင့်သင်တို့ကိုအထူးတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေအများအပြား profiles များအားလုံးမှတဆင့်ရှာဖွေကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုထားပါသည်. သင်ကထောင့်ကော်ဖီဆိုင်သို့ဦးသောအခါသင်သည်သာတစ်ခုတည်းသောလူမျိုး၏လက်တဆုပ်စာအစည်းအဝေး၏အခွင့်အလမ်းရှိသည်, တခါတရံမှာအားလုံးမည်သူမဆိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းဘယ်တော့မှမ. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အားဖြင့်သင်တို့ကိုတစ်စုံတစ်ဦးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကိုရှာဖွေသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအလွန်တိုးတက်ပါပြီ.
2. သင်လိုချင်တာကဘာ Get
အတော်များများဟာအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုကိုသင်တချို့ key စာပိုဒ်တိုများပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦး filtering ကိုလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် based profiles များအားလုံးမှတဆင့်ရှာဖွေခွင့်ပြု. သာနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုရှိသည် profiles များအားလုံးမှတဆင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် “ခရစ်ယာန်” သို့မဟုတ် “အားကစားပရိတ်သတ်” ထိုမြစ်၌, သင်သည်သင်၏အမြင်နှင့်အကျိုးစီးပွားများတူညီကြောင်းတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့သည့်အတွက်တိုးမြှင့်အခွင့်အလမ်းရှိသည်နှင့်မကျင့်သောသူတို့သည်လည်းထိုဖယ်ရှားပြီး. သင်ကဘားတန်းကိုတစ်ဦးယောက်ျားမိန်းမတွေ့ဆုံသည့်အခါ, သူတို့ခရစ်ယာန်ဘုရားမဲ့ဝါဒီသို့မဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းလျှင်သင်ညာဘက်လင်းနို့ဖြတ်ပြောနေတာနည်းလမ်းမရှိရှိသည်, တစ်ဦး San Diego မှ Charger ရဲ့ပရိတ်သတ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘောလုံးကွင်းအကြမ်းဖက်အားကစားကြောင်းထင်လျှင်. အလားအလာပွဲများ၏ profile များကို identify အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုအပေါ်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် filtering ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏အကျိုးစီးပွားကိုမျှဝေမသည်လူ profiles များအားလုံးမှတဆင့်ရှာဖွေသုံးစွဲအချိန်ကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်.
3. personal info ပုဂ္ဂလိက Stay နိုင်သလား
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ကြီးစွာသောအရာသည်၎င်း၏အမည်မဖော်ဖြစ်. တစ်စုံတစ်ဦးနဲ့အဆက်အသွယ်အစပြုသည့်အခါသင်အွန်လိုင်းဖို့ဆွဲဆောင်ခဲ့ကြ, သင်ပင်သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးinformationÖnotထွက်ပေးရန်မလိုပါ. သင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့တူကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များထွက်မပေးခင်ကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသိကျွမ်းဖို့အချိန်ယူနိုင်ပါသည်, လူတွေ့ဆုံ၏အခြားပုံစံများကိုနဲ့မတူပဲ. သင်ဆိုရင် single အစက်အပြောက်မှာတစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်းလျှင်, သင်အဆက်အသွယ်မပြတ်စေနိုင်ဖို့သင့်ဖုန်းနံပါတ်ပေးပစ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေကြသည်, သင်သည်သူတို့ကောင်းမွန်သောရည်ရွယ်ချက်များရှိပါကသိရုံလူတစ်ဦးတွေ့ဆုံကြပြီး, သူနှင့် ပတ်သက်. လုံလောက်စွာမသိရပါဘူးသို့မဟုတ်သူမ၏ပင်လျှင်.
သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုဆက်သွယ်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်သော်လည်းသင်တကယ်သင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟုပြောဘာလိုချင်ထွက်စီစဉ်ထားရန်အချိန်ကြာနိုင်ပါတယ်အီးမေးလ်ပို့. သင်တို့ကိုဧည့်ခန်းကိုဖြတ်ပြီးတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်တွေ့သူတို့ကိုချဉ်းကပ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်, တခါတရံတွင်အာရုံကြောနှင့်အရှက်သင်ကိုအကောင်းဆုံးရနိုင်. သင်သည်သင်ပြောသွားခဲ့ကြသောအရာကိုထုတ်စီစဉ်ထားခဲ့ကြပေမည်, သင်မူကား, ချဉ်းကပ်သောအခါအားလုံးသင်တို့နှုတ်ထဲကလာမယ့် flustered ရရှိသွားတဲ့. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အားဖြင့်သင်တို့ကိုဆင်းထိုင်နိုင်ပြီးသင့်ရဲ့အီးမေးလ်ကိုစဉ်းစား, စုံတွဲတစ်တွဲကြိမ်ကျော်ဖတ်, သင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအကောင်းဆုံးသင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်ကိုသိပါကစေလွှတ်မည်. လူတစ်ဦးအတွက်ယင်ကောင်အပေါ်တစ်စုံတစ်ဦးကချဉ်းကပ်အတူပါလာနိုင်တဲ့လူမှုရေးအဆင်မပြေတွေဟာအပေါ်ယံအားဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်သည်.
တစ်ဘားမှာ, ကလပ်, ကော်ဖီဆိုင်, ရာအရပ်ကိုတွေ့ဆုံအခြားရိုးရာဆိုရင် single သို့မဟုတ်, သင်၌စိတ်ဝင်စားကြသူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်သလောက်က. အဲဒီမှာအဲဒီလူမှုရေးစုဝေးမှာအာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့အတက်ကြွစွာယှဉ်ပြိုင်သည်နှင့်တစ်ဦးအပြန်အလှန်အကျိုးပြုအပေါ်တစ်ခုကလာရန်အလွန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူရှေ့ဦးစွာ မှစ. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှန်သည်. သင်သည်အရာရာ၌သင်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားကြပြီးညာဘက်လင်းနို့ဖြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး connection ကိုဖွဲ့စည်းထားနိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးနဲ့သီးသန့်အီးမေးလ်စကားပြောဆိုမှုအတွက်တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးဆက်သွယ်ပြောဆို, အစားထက်အားလုံးအတူတူဂိုးထွက်သည်အခြားတစ်ခုတည်းယောက်ျားတွေနဲ့ငါ့ရဲ့မိန်းကလေးလို့အပြည့်အဝအခန်းတခန်းတွင်ယှဉ်ပြိုင်.
အစဉ်အလာချိန်းတွေ့မြင်ကွင်းတစ်ခုနှင့်အတူတက်တိုက်ကျွေး Single အ, နှင့်အပြောင်းအလဲတစ်ခုရှာဖွေနေ, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သွားကြဖို့လမ်းကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ. သင်သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များဝေမျှပေးခြင်းမရှိဘဲအလားတူအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူလူတွေပိုပြီးခရီးဦးကြိုပြုခြင်းနိုင်ပြီး, ပြီးပြည့်စုံသောပရိုဖိုင်ကိုသင်တွေ့တစ်ချိန်က, သင်တစ်ဦးကိုချက်ချင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေး connection ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်. ဒါဟာဆက်ဆက်ကိုယ်တိုင်စမ်​​းသုံးကြည့်ရကျိုးနပ်သည်.